Ondrilahy (antokon-kintana) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Antokon-kintan'ny Ondrilahy)
Ny Ondrilahy dia antokon-kintan'ny zôdiaka izay andalovan'ny masoandro amin'ny 19 Avrily hatramin'ny 14 Mey. Eo anelanelan'ny antokon-kintan'ny Hazandrano eo andrefany sy ny an'ny Ombilahy eo atsinanana izy. Ny Ondrilahy, izay atao hoe Aries amin'ny teny latina, dia iray amin'ireo antokon-kintana miisa valo amby efapolo hitan'i Ptolemeo. Amin'ny teny frantsay dia atao hoe Belier io antokon-kintana io.
Ny antokon-kintan'ny Ondrilahy
Io antokon-kintana io dia atao amin' ny teny arabo hoe االحمل / Al-Hamal ("ondrilahy") izay niavian' ny anaram-bintana sy volana malagasy hoe Alahamady (na Alahamaly amin' ny faritra maro eto Madagasikara). Amin' ny teny grika izy dia ata hoe Κριός / Krios. Amin' ny fiteny soahily dia atao hoe Hamal na Kondoo io antokon-kintana io. Amin' ny teny maley kosa dia atao hoe Hamal na Biri-biriihany koa izy.
Rehefa nampiasaina amin'ny fanandroana ny antokon-kintana dia nanome ny iray amin'ireo evan'ny zôdiaka mikisaka ho anarany io anaran'antokon-kintana io nefa amin'izao fotoana izao dia efa tsy mifanandrify amin'ny fotoana fandalovan'ny masoandro amin'ny fari-danitry ny antokon-kintana Ondrilahy ny fotoana andalovan'ny masoandro ao amin'ny evan'ny Ondrilahy izay manomboka eo amn'ny 21 Marsa ka miafara amin'ny 20 Avrily.
Antokon-kintan' ny zôdiaka:
Ondrilahy - Ombilahy - Kambana - Foza - Liona - Virijiny - Mizana - Maingoka - Bibilava - Mpitifitra Tsipìka - Tandrok' Osy - Mpitondra Rano - Hazandrano
Evan' ny zôdiaka:
Ondrilahy - Ombilahy - Kambana - Foza - Liona - Virijiny - Mizana - Maingoka - Mpitifitra Tsipìka - Tandrok' Osy - Mpitondra Rano - Hazandrano
Vintana ao amin' ny fanandroana malagasy:
Alahamady - Adaoro - Adizaoza - Asorotany - Alahasaty - Asombola - Adimizana - Alakarabo - Alakaosy - Adijady - Adalo - Alohotsy
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ondrilahy_(antokon-kintana)&oldid=1010093"
Dernière modification le 20 Martsa 2021, à 19:35
Voaova farany tamin'ny 20 Martsa 2021 amin'ny 19:35 ity pejy ity.